Downhole Tools များ
Downhole Motors က
Valve Check arrow
core Tools များ
ဟိုက်ဒရောလစ် DIAC ဘရိတ်
တူးဖော် Motors က
QYZ အမျိုးအစား Hydraulic Drilling ပုလင်း
integral Blade ကိုတည်ငြိမ်ရေးကို
ဟိုက်ဒရောလစ်လှိုလေ့ကျင့်ခန်း string ကို၏ axial တုန်ခါမှုဝန် generate နှင့်ကျင်းပေါက်ပွတ်တိုက်အားကျော်လွှားရန်ဟိုက်ဒရောလစ်သွေးခုန်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအောင်မြင်စွာဒေါင်လိုက်ဝဲလ်, မော်တာပဲ့ထိန်းတူးဖော်ခြင်း, rotary ပဲ့ထိန်းတူးဖော်ခြင်း, ကြီးမားတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခံရဝဲလ်နှင့်ယှေလကျောက်ဓာတ်ငွေ့ရေလှောင်ကန်တူးဖော်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှ ၀ ယ်လက်များကိုဟိုက်ဒရောလစ်လှို့အတွက်စိတ်ရောကိုယ်ပါပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးမညီညွတ်သောပုံသဏ္urementာန်ကိုမြင်တွေ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယခုအခါအပြန်အလှန်ဆုလာဘ်များအပေါ်မှီခိုသောပြည်ပမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုမဆိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့အားထပ်ဆောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဖုန်းခေါ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်မညီညွတ်သောဝယ်လိုအားကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှ ၀ ယ်သူများကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်အားထုတ်မှုများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်ဖောက်သည်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်။ ကျနော်တို့ကာလ၏သမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းနှင့်အညီအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်သွားကြသည်မဟုတ်။
1. downhole အလေးချိန်လွှဲပြောင်း Improve
MWDS / LWD နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 4.
5. ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်း-bits အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူကောင်းစွာကိုက်ညီ
၄/၃ （၁၂၁ မီလီမီတာ）
၆/၃″ （၁၇၂ မီလီမီတာ）
L / s ကို
15 (16L / s) ကို
15 (28L / s) ကို
15 (45L / s) ကို
ပါဝါကိုနို့သီးခေါင်း, disc ကိုအဆို့ရှင်စုဝေးလှိုစနစ်က: ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်သုံးပိုင်းပါဝင်ပါသည်။
ရေတွင်းနံရံနဲ့တူးဖော် tool ကိုအကြားပွတ်တိုက်အားပြောင်းလဲနေသောမှငြိမ်ရာမှပြောင်းလဲပစ်သည်။
ယခင်: ကြီးမားသောလျှော့ Convenience coring tools များ
နောက်တစ်ခု: Special Price for Brake Pad And Brake Shoe - Coring Tools – LUQI
Hot Sale for China Home Use Standby Power Yucha...
Factory Selling China High Quality Drilling Dow...
Ordinary Discount China 5lz127 Downhole Motor f...
Factory best selling 50HZ 5KW Portable Silent D...
Wholesale ODM China API 5lz210X7.0 Downhole Mot...
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2019: All Rights Reserved ။ Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
ရေနံ Driling အဆင့် Barite စျေး , Barite ဝယ်သူ , သဘာဝ Macromolecule Filtrate လျှော့, အနိမျ့ချောင်းအရည်ချောဆီကို, Barite စျေး Per တန်ချိန် , Barite Powder စျေး ၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတည်းခိုခန်း3#, Zhonghua တောင်ဘက်လမ်း, Shijiazhuang မြို့ Huilong, Hebei ပြည်နယ်, PRC ။